walaloo Archives | Oromia Shall be Free
Tag Archives: walaloo
June 13, 2015	1
Hayyuu meeqa kan biyyaaf abdatame, Du’aa jala bu’ee humnaan nurraa saamee, Diinaatu aagibeeysee ifaan saanii dhaamee, Guyyaa akka malee addunyaa irraa deeme. Goota murtii …
May 22, 2015	Comments Off on FILUUN BOORTAAN TAATU!
April 20, 2015	Comments Off on ~Du’a dheefa du’a dheeyxee?
Du’a dheefa, du’a dheyxee… Yaa lammikoo, karaa meeyxee ? Nama keessaa si filattee Goojjo teetii gad darbitee Qeheef maatiin gargar baaftee Lagaa gaaraan baaftee buuftee …
Walaloo Afaan Oromoo GOOTOTA
March 22, 2015	Comments Off on “YAA CALANQOO LOLAA..!”
Galmee injifannoo si yaa dirree duulaa, Gootummaa abbootiin si keessatti laala, Dhiigni galaanawee sirra yaa’e akka lolaa, Bar dhibba caalaa, lafee dhabde awwaala, Hanga …
March 16, 2015	Comments Off on Mohamed Sheka, KASIM-Barroo and Callaa Carcar rocking in Calgary
Mohamed Sheka, KASIM-Barroo and Callaa Carcar rocking in Calgary Publicerat av Kasim-Barroo Supha Söndag 24 augusti 2014
March 4, 2015	Comments Off on Walaloo Afaan Oromoo/Moosinni Ni Dabra